diadema ao anatin'ny Montastrea annularis damba. Sary © Adán-Guillermo Jordán-Garza 2008 / Marine Fotobank
Ny hazom-boatin-dranomasina dia hebivore manan-danja amin'ny haran-dranomasina, ary amin'ny sehatry ny tontolo iainana dia mandray anjara mavitrika amin'ny fitazonana ny fifandanjana eo amin'ny vatohara sy ala. Ny andraikitr'izy ireo dia manan-danja manokana amin'ny haran-dranomasina izay misy fambolena hafa (toy ny parrotfishes sy ny bitro). Ny Urchins dia manohana ny faharetan'ny haran-dranomasina amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alaola ary manome toerana ho an'ny haran-koditra, ka manampy amin'ny fitazonana ny fepetra ilaina ho an'ny vondrom-piarahamonina haranina mba hibahana rehefa misy korontana mahery vaika (toy ny rivo-doza na ny hain-trano).
Ny Urchins dia mety ho mora ihany koa amin'ny aretina. Any amin'ny toerana izay ahazoan'ny mpamboly fambolena mananotena dia ny manampahefana dia maniry ny handinika ny fanampiana amin'ny famerenana indray ny populaire any amin'ny toerana misy ny fahamendrehana.
Mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny haran-dranomasina koa ny Urchins. Amin'ny toe-javatra sasantsasany, izay mety ho ketraka sy / na lozam-piravoana azo avy amin'ny volokano, dia mety hanala ny vatosoa harefo ny fihenan-tsakafo ary hampihenana ny rakotra kôlôninina manan-danja ref ary mitarika ho amin'ny bio-erosiona tsy azo ovaina. Na dia mety ho matotra kokoa aza ny olana ara-pitsipika mahatonga ny gera ho olana, ny mpitantana dia mety mila mandinika ny fanaraha-maso (fandroahana) ny fikarakarana ny fako raha te hanatsara ny fahasimbana amin'ny vatohara na hanampiana ny fahasitranana.
Inona no mitranga any amin'ny Ranomasina Urchin?
Misy antony maromaro mety hitranga any an-dranomasina. Mety ho vokatry ny famongorana ireo biby mpihaza voajanahary, toy ny triggerfishes sy ny plasses, ref na fihenan'ny fifaninanana ara-tsakafo izay mety ho vokatry ny fanangonam-bokatra avy amin'ny trondro voajanahary. Ny fanimbana voajanahary amin'ny haran-dranomasina koa dia mety hampiroborobo ny fisondrotry ny ala noho ny fitomboan'ny fitomboan'ny ala.
jereo fitondrana urchin ho fampahalalana momba ny fanaraha-maso sy fampiroboroboana ny isan'ny populaire.